Ikhalenda yezoQoqosho kwiNgxelo FXCC
Ikhaya / Imfundo noPhando / Research / Ikhalenda Economic
Ikhalenda yezoqoqosho yintsimbi ebalulekileyo yokurhweba esoloko ihoywa kwaye ingabalulekanga ngabathengisi. Ukuhamba phambi kwekhalo; Ukwazi ixesha lokukhutshwa kwezoqoqosho ngeendlela zekhalenda, yinto ebaluleke kakhulu ekuncedeni ukusebenza kworhwebo. Ukuba nokufikelela kwikhalenda yezoqoqosho ngokubanzi, ebanzi kunye neenkcukacha, kubaluleke kakhulu kwaye abahwebi be-FX eli xabiso lugxininiswa.
Kwenziwa kanjani benzise i-Calendar yakho
Beka uluhlu lomhla wekhalenda
Khetha ukuba yiliphi ilizwekazi elibhekiselele kulo
Khetha ukuba yiliphi ilizwe elimalunga nolwazi
Nciphisa ikhalenda yakho ukugqamisa iimpapasho ezithile kunye nokukhutshwa
Khetha umgangatho wempembelelo; phezulu, ephakathi okanye ephantsi
Imicimbi yezoqoqosho ze-macro, iingxelo kunye nokukhishwa kwedatha, epapashwe ngu: oorhulumente, amasebe karhulumente kunye nemibutho ethile yabucala; ezifana noMarkit kunye ne-PMIs yabo ehloniphekileyo kwaye ekulindeleke, inokuchaphazela ngokuphawulekayo ixabiso lemali, ngokukodwa xa lilingana nelinye iontanga zemali.
Ngaloo ngqondweni engqondweni yeFXCC sele yongeze ikhalenda yezoqoqosho kunye nentsebenziswano kunye nabathengi bethu abaxabisekileyo. Njengama calendeni amaninzi ezoqoqosho unayo yonke into elula kunye neenzuzo esizilindele kwikhalenda eliyisiseko. Nangona kunjalo, siye songeza umxholo obongezelelweyo kunye nomxholo ukuqinisekisa ukuba ikhalenda yethu iye yandisa ukubaluleka kwabaxhasi bethu. Ikhalenda nayo inomfanekiso obonisa amanqanaba entengiso kwimpembelelo yokukhululwa kweendaba.
Xa ukhetha iiparitha ezahlukeneyo ngendlela yeeqhosha, abathengi be-FXCC baya kukwazi ukusetha ukukhetha kwabo.